विराटनगर / छिमेकी मुलुक भारतमा एकै दिन दुई लाख ९४ हजारभन्दा बढी कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन् । भारत पछिल्लो समय तीव्र रुपमा फैलिएको कोरोनाका कारण अत्यन्तै प्रभावित बनिरहेको मुलुक हो । दैनिक भेटिन नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या अन्य मुलुकमा...
बायर्नलाई दस अङ्कको अग्रता
विराटनगर / जर्मन बुन्डेसलिगामा लिग लिडर बायर्न म्युनिखले दस अङ्कको अग्रता बनाएको छ । मङ्गलबार राति लिभरकुसेनमाथि २–० गोलको जित निकाल्दै शीर्ष स्थानको बायर्नले दस अङ्कको अग्रता बनाएको हो । बायर्नको मैदानमा घरेलु टिमलाई जिताउन इरिक म्याक्सिम चौपो–मोटिङ र...
आज २०७८ वैशाख ८ गते बुधबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिषी एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको...
चेल्सी शीर्ष चारमा
विराटनगर / इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा चेल्सी र ब्राइटनले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् । मङ्गलबार राति भएको खेलमा गोलरपहित बराबरी खेल्दै चेल्सी र ब्राइटनले १–१ अङ्क बाँडेका हुन् । चेल्सीको मैदान स्टाम्फोर्ड ब्रिजमा निर्धारित समय दुवै टोलीले गोल गर्न...